“Waxa Lama Huraan Ah In Hay’adaha Warbaahintu Ay Dib Isugu Noqdaan Oo Ka Fiirsadaan Inay Soo Celiyaan Dhaqankii Suubanaa Ee Suxufiyiintii Waaweynayd Jideeyeen Siyaasiyiintana Ay…….” – | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Waxa Lama Huraan Ah In Hay’adaha Warbaahintu Ay Dib Isugu Noqdaan Oo Ka Fiirsadaan Inay Soo Celiyaan Dhaqankii Suubanaa Ee Suxufiyiintii Waaweynayd Jideeyeen Siyaasiyiintana Ay…….” –
April 1, 2017 - Written by Mustafe Faro
“Waxa Lama Huraan Ah In Hay’adaha Warbaahintu Ay Dib Isugu Noqdaan Oo Ka Fiirsadaan Inay Soo Celiyaan Dhaqankii Suubanaa Ee Suxufiyiintii Waaweynayd Jideeyeen Siyaasiyiintana Ay…….” – W/Q: Cumar M. Faarax
Kama Qariyo Wadhatada. Wallee Qoonta Mililka Leh
Qaarka Sare Ma Dhaydhayo”
Muddo Haatan laga joogo 15 sannadood ka hor oo aan ka shaqo galay Wargeyskii Maandeeq ee imika la yidhaahdo Dawan, waxaan ugu imi iyadoo warbaahinta tirada badan ee xilligan Somaliland ka jirtaa faro ku tiris tahay, gaar ahaan Jaraa’idka oo ahaa Jamhuuriya iyo Maandeeq. Halka Telefishannada tirada beelay wakhtigan-na uu jiray Hargeysa TV oo habeenkii laga daawan jiray shanta degmo ee caasimada Hargeysa gudaheeda, TV-gaas oo markii dambena loo bixiyay Somaliland Space Chanel (SLSC). Waxa kaloo jiray Idaacada Radio Hargeysa oo maantana xaga idaacadaha wali kaligeed uun ka jirta wadanka. Xiligaas, waxa Hay’adaha warbaahintu ahaayeen qaar ka sakow shaqadooda saxaafadeed, Hay’ad kasta oo saxaafadeed waxa dhexdeeda ka furnaa Akaadami soo saara jiil la carbiyay oo shaqada dhexdeeda lagu siiyay tababar (On Job Training), oo si xeel dheer loogu hanuuniyay inay dareemaan masuuliyada shaqada xasaasiga ah ee ay hiwaayadoodu jeclaatay. Waxa jiray tusaale ahaan wargeyskii Maandeeq oo ahaa wargeyskii labaad oo la aasaasay sannadkii 1998-kii, waxa sabankii aan ku cusbaa ka shaqeyn jiray weriyeyaal xirfad leh oo aqoontooduna aad u dhisnayd oo intooda badan heer jaamacadeed ahaa. Waxa raggaas odayaasha ahaa ay qofka shaqada ku cusub sidayda oo kale ay siin jireen wacyigelin dheer oo ay ku hoggotusaaleyn jireen in shaqada saxaafaddu tahay “Xirfad dadkeeda laga doonayo dhawrsanaan, akhlaaq iyo masuuliyad.” Waxaan macalimiintayadii naxariista badnaa ka mid ahaa Alle ha u naxariistee Guddoomiyihii Maandeeq, Muuse Aadan Yuusuf, Tifaftirahayagii Mustafe Cabdi Ciise (Shiine) oo mar dambena Guddoomiye noo noqday, imikana ah Badhasaabka Gobolka Awdal, Alle ha u naxariistee Axmed Sheekh Xuseen Maxamed, Ismaaciil Ibraahim Qodax (I.I. Qodax) iyo Maxamed Axmed Ciise oo saddexduba xijaabtay. Waxa iyaguna joogay Tifaftirihii u horreyay ee Maandeeq mar dambena Guddoomiye ka noqday Maandeeq Media Group Faysal Cabdillaahi Cabdalle, Xasan Xuseen Cabdi, Cabdilaahi Quulle Jaamac, Cabdiqani Axmed Askar iyo Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Faahiye (Shamax) oo ah La Taliyaha Madaxweyne Siilaanyo ee arrimaha sharciga, horena Afhayeenka Madaxtooyadda u soo noqday muddo sannad ku dhow isla xukuumadan KULMIYE. Nasiib daradayda kumaan soo gaadhin Cabdilaahi Aadan Cumar (Wayab) iyo Xuseen Cali Nuur. Haddaba, wargeyskayaga oo ahaa kii dawladda, waxa uu haddana ahaa mid illaa xad si madax-bannaan u shaqeeya oo akhristeyaashiisuna aad ugu xidhnaayeen wax soosaarka hawlwadeennadiisii xulka ahaa. Waxa jirtay in muddo sannad ka badan maalin kasta goobta shaqada aan ku qaadan jiray tababar iskugu jiray laba nooc oo kala ahaa xirfada Saxaafadda iyo waano ku wajahan in qofka suxufiga ah laga doonayo inuu ku sifoobo akhlaaq wanaag, dhexdhexaadnimo iyo fiiro-dheeri. Waxaan arki jiray marka shir jaraa’id uu qabanayo Wasiir, Xildhibaan, Siyaasi mucaarid iyo muxaafidba, waxa dhaqan ahaa inay marti qaad u soo diri jireen wargeysyada iyo warbaahinta kaleba. Ka dibna waxa ka hor inta aan shaqada laga rawixin loo asteyn jiray cidda shaqadaas loo dirayo. Waxaan arki jiray qofka loo dirayo shirarka jaraa’id ee waaweyn ee siyaasiyiinta iyo xukuumadda oo sameyn jiray u diyaar garow oo maskaxda ku sii qaban jiray ama buug yare ku sii qoran jiray mawaadiicda ay su’aalo ka dhalan karaan. “Waxaan idinku amrayaa in aad su’aalo waxtar leh oo xaqiiqo ah, xirfadeed oo adag aad weydiisaan siyaasiga shirkaas jaraa’id qabanaya,”ayuu ahaa aragtida Guddoomiyihii iyo Tifaftirihii MAANDEEQ, oo si maalinle ah ugu dardaari jireen suxufiyiintii wargeyskaas ka hawlgeli jiray. Waxa xusid mudan in shirka jaraa’id ee madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka ama siyaasi weyn oo mucaarid ah marka ay hadlayaan, waxa Hay’adaha warbaahintu u diri jireen suxufiyiinta waaweyn. Tusaale ahaan marka Madaxweynuhu shirjaraa’id qabanayo waxa noo tagi jiray sida badan Muuse Aadan Yuusuf iyo Mustafe Shiine, wargeyska Jamhuuriya waxa iyagana uga qaybgali jiray Faysal Cali Sheekh iyo Xasan Siciid Yuusuf oo Guddoomiye iyo Tifaftire ka ahaan jiray. Waxay dhammaantood madaxweynaha waydiin jireen su’aalo maangal ah oo aad u adag, isaguna uu uga jawaabi jiray si waafiya. Idaacada Radio Hargeysa iyo Muuqbaahiyihii u horeeyay waxa laga sii dayn jiray shirarka jaraa’id oo xataa su’aalihii la socdaan. Shirka jaraa’id, waxa khasab ahaa oo siyaasiga ama masuulka qabtay uu hadalkiisa ku bilaabi jiray warbixin yar oo kooban oo uu faahfaahin jiray ujeeddadiisa, ka dibna waxa suxufiyiintu ka haqab beeli jireen inay waydiiyaan su’aalo aad u badan wax ku oolna ah oo hadafkoodu ahaa “Lafta jabi xaragana ha ka tagin.” wax kasta qofka waa la su’aali jiray waxase suxufiyiintu u dhigi jireen si asluub leh oo togan. Waxase macruuf ahayd in wakhtiyada qaar in qofku hadalkiisa ku bilaabi jiray inuu ka afeefto inaan wax su’aalo ah la weydiin, balse suxufiyiintu way sheegi jireen markay qorayaan ama baahinayaan warkaas in aan su’aalo la weydiin. Haddaba, marka la baahinayo shirkii jaraa’id may dhici jirin in hadalka qofku yidhi oo kaliya la qoro ee waxa daruuri ahaa in la la raaciyo su’aalihii la weydiiyay si bulshada loogu gudbiyo wax xiiso badan oo dheelitiran. Waxaan garanayaa iyadoo weriyaha aan su’aalaha qorin Tifaftiruhu ganaaxo ama canaanto. Wakhti xaadirkanse, tallow ma jiraan in saxaafadu qofka cusub ee ay qaataan waxna baraan, kuna wacyigeliyaan inuu ilaaliyo karaamada saxaafadda oo akhlaaqiyaadka qofku kow ka yahay, waxna baraan? Waxa kale oo is weydiin leh saxaafadii xilligaas shaqeyn jirtay Somaliland waxay ahaayeen qaar aad u bisil oo waxna barta, waxna dhegaysta. Goorma ayaa inoogu dambaysay wargeys qora su’aalaha shirarka jaraa’id. Markii la arkay kala daadsanaanta suxufiyiinta siyaasiyiintu waxay meesha ka saareen su’aalihii la weydiin jiray, waxaanay shirarka Jaraa’id ee macnaha lahaa u bedaleen mid farriintooda oo kaliya laga soo qaado oo laga yaabo sida qaalibka ah inaan wax su’aalo ahba laga weydiin mowduucyada culus ee ay ka hadleen. Waxa lama huraan ah in Hay’adaha warbaahinta sida Telefishannada, Wargeysyada iyo shabakadaha Internet-kuba ay dib isugu noqdaan oo ka fiirsadaan inay soo celiyaan dhaqankii suubanaa ee suxufiyiintii waaweynayd jideeyeen siyaasiyiintana ku cadaadiyaan inay aqbalaan in waxay sheegayaan wax laga weydiiyo. Waxaan ku soo khatimayaa in shirarka muhiimka ah loo diro suxufiyiin waaweyn oo xog cusub dibada u soo saari kara oo yoolka saxaafaddu noqdo sidii Abwaan Gaariye ku sharraxay Maansadiisii Cosob ee ahayd:
“Codkii dadka baahan
Adduunka ku Ciillan
Anaa Cudha Haysta.
u Diiday Cir-weyne”